Izindlela > Isifo Sikashukela Sokunqoba!
Ukwelashwa komzimba ngohlobo 1 sikashukela
Ukwelashwa komzimba ngohlobo 1 nohlobo 2 sikashukela i-mellitus: i-physiotherapy ne-hydrotherapy, izinqubo Kuqinisa amazinga kashukela isikhathi eside Kubuyisela ukukhiqizwa kwe-insulin ngamanyikwe abafundi bethu abasebenzisa ngempumelelo i-Aterol ukwehlisa cholesterol. ...
I-leeches ku-arteriosulinosis yangaphakathi
Izinhlungu nge-arteriosulinosis yemikhumbi Usuku oluhle! Igama lami nginguHalisat Suleymanova - ngiyi-phytotherapist. Ku-28, wazelapha umdlavuza wesibeletho ngamakhambi (okuningi ngesipiliyoni sami sokuphulukiswa nokuthi kungani ngaba yi-herbalist efundwa lapha: Indaba yami). ...
Thanda Isifo Sakho Sikashukela
Ukwelashwa kwesifo sikashukela ngendlela kaSolwazi uValery Sinelnikov Odokotela abaningi bayaqiniseka ukuthi isifo esinjengesifo sikashukela sivame ukuvela ngenxa yezizathu zengqondo. ...
UKonstantin Monastyrsky: umbono onguchwepheshe ngesifo sikashukela nokuphulukiswa ngaphandle kwezidakamizwa
UKonstantin Monastyrsky kwisifo sikashukela nokuphulukiswa kwesifo sikashukela i-mellitus kuya ngokuya kuvama nsuku zonke. Izizathu zokubonakala kwaso azigcinanga nje esimweni esiyindlalifa yifa, kodwa futhi ukungondleki. ...
I-Mantra yokwehlisa ushukela wegazi
I-Mantras yesifo sikashukela sikashukela yisifo esiyingozi esithinta abantu bayo yonke iminyaka. Ekuhambeni kwezifundo, kwavezwa ukuthi i-mantra yesifo sikashukela ingasenza ngcono isimo sesiguli futhi ivikele nezinkinga zenqubo ye-pathological. ...
Izinhlobo ze-enemas, inqubo yokwakhiwa kwazo, izinkomba zokusetshenziswa
Ukuhlanza i-enema Ukuhlanza i-enema kusetshenziselwa ukuhlanza amathumbu kusuka emgodini namagesi. I-enema yokuhlanza inika kuphela amathumbu aphansi. ...
Isifo sikashukela e-USA: imithi namaphilisi, izidakamizwa zaseMelika, ukuthi ungaselapha kanjani isifo sikashukela
E-United States, isidakamizwa esisha sesifo sikashukela sohlobo II sesivunyiwe. Umuthi uzoba ngumqhudelwano oqondile ku-dapagliflozin (AstraZeneca), canagliflozin (Johnson & Johnson no-Eli Lilly) kanye ne-empagliflozin (Boehringer Ingelheim), kubhala i-Reuters. ...
Ungawenza kanjani ngokwejwayelekile umfutho wokuphefumula ngokwendlela ye-Strelnikova
Umfutho wegazi ophakeme: Ukuzivocavoca okwenziwa yiStrelnikova. Empilweni yanamuhla, inkinga efana nomfutho wegazi ihlukumeza bonke abantu abathathu emhlabeni abasuke sebegubhe iminyaka yabo engama-50. ...
Ungayinciphisa kanjani ingcindezi yamakhambi abantu ekhaya: izindlela eziphumelela kakhulu
I-Vitafon ngohlobo 2 sikashukela: ukubuyekezwa kanye nama-regimens
Isifo sikashukela mellitus UNGAHLULELA KULULA! I-Vitafon ithuthukisa ama-pancreas nomsebenzi wesibindi futhi ivimbela ukuthuthukiswa kwezinkinga zesifo sikashukela: i-nephropathy, i-neuropathy ne-angiopathy. ...
Izimpawu zesifo sikashukela ezinganeni
Izimpawu zesifo sikashukela ezinganeni, okufanele zikuqwashise. Isifo sikashukela yisifo esikhohlisayo futhi esiyingozi kakhulu. ...
Yini ihlukanisa ushukela wegazi: ukudla ne-insulin
Unganciphisa kanjani ushukela wegazi masinyane, okuyimiphi imikhiqizo ehlisa ushukela Abazali bethu, ikakhulukazi ogogo nomkhulu, inkinga yokunciphisa ushukela wegazi ikhathazekile njalo futhi kancane. ...
Izindlela zokwelapha zokwelapha i-pancreatitis: izivivinyo ezizosiza ukuthuthukisa ukusebenza kwamanyikwe
Ukuzivocavoca Usizo Ngokuthola i-pancreatitis I-pancreas ingenye yezindlela ezibalulekile zomzimba wethu, owenza imisebenzi emibili ebalulekile kuyo. ...
Isifo sikashukela - Ukwelashwa kweLaser
Igazi elihlanzekile lenzelwe ngamunye wethu i-VLOK isikhathi esingaphezu kweminyaka engama-20, kepha ngalesi sikhathi inqubo ithole ukuqashelwa emhlabeni jikelele. ...
Ukwelashwa kwe-pancreatitis ngama-leeches: ungabeka kanjani ama-leeches nge-hirudotherapy?
IHirudotherapy ye-pancreatic pancreatitis. Isikhathi esihle sosuku! Igama lami nginguHalisat Suleymanova - ngiyi-phytotherapist. ...
Indlela kaZherlygin Yesifo Sikashukela Esihle kakhulu: Ividiyo yokuzivocavoca eyinkimbinkimbi
Uma ungazi ukuthi yini okufanele uyenze, thatha isinyathelo sokuya eMoskovsky Komsomolets No. 2453 sangoNovemba 10, 2006. Ukulwa nesifo sikashukela. "Ufuna ukunqoba lesi sifo, ugijime, ugxume, undize ekugcineni! ...
Incwadi kaJuri Babkin - i-Insulin nempilo - enendlela yokunciphisa i-insulin
Isifunda sokuqeqesha / Isibonakaliso Sokuphikisa okubhalwe phansi le ncwadi izokusiza ukuthi uthole impilo yakho kabusha. Ichaza indlela elula yokuhlala uphilile ngaso sonke isikhathi - usebenzisa indlela entsha esekwe ngokwesayensi. ...
Yini esiza ngesifo sikashukela: izindlela zokupheka namakhambi
Ukuphefumula ngokuphefumula kuphulukisa isifo sikashukela ngaphandle kwezidakamizwa: ukubuyekezwa kochwepheshe neziguli
Ukuphefumula ngokuphefumula kuphulukisa isifo sikashukela ngaphandle kwezidakamizwa: izibuyekezo ezivela kochwepheshe neziguli. ...
Ukwelashwa kwesifo sikashukela eBolotov - ukwelashwa kwesifo sikashukela
Ukunakekelwa kwesifo sikashukela kweBolotov: imininingwane ngezifo. Ushukela wezitshalo nowezilwane Uma kwenzeka izinso ezihlanganisiwe zilahlekelwe ingxenye yezicubu zazo zeselula, kumele kwenziwe lezi zinqubo ezilandelayo. ...
Ungasibona Kanjani Isifo Sikashukela Esigabeni Sokuqala: Izimpawu Zokukhula Ushukela
Isifo Sikashukela se-Endocrinology
Izimpawu nokwelashwa kwe-neuropathy yesifo sikashukela
I-neuropathy yesifo sikashukela: ukuxilongwa, ukwelashwa nokuvinjwa ...
I-Mackerel kuhhavini - zokupheka okumnandi ze-mackerel ezibhakwa kuhhavini
IBrynza nesifo sikashukela
Ukudla okulinganiswe kahle, noma ukuthi ungabale kanjani ama-unit wesinkwa sikashukela
ImibuzoIzindlelaUkwelashwa okuhlukileUmlenze uphuthuma, unyawo lwesifo sikashukelaIsifo Sikashukela NemidlaloUkuhlaziyaAmanyikweAmamitha kashukela egaziIsifo sikashukelaImpilo enesifo sikashukela
I-casserole yaseMedithera ne-casserole enotamatisi
Ama-Blueberries anesifo sikashukela
Ukuqina kwesifo sikashukela - ukuzivocavoca kwisifo sikashukela
I-ATHEROSCLEROSIS - Ukukhishwa kwezinsizakalo ku-anatomy ye-pathological